INomad isungule imeko yayo yesikhumba sanamhlanje yee-AirPods 3 | Ndisuka mac
UNomad usungule imeko yakhe yesikhumba sanamhlanje yee-AirPods 3
Ngeli thuba kwaye njengesiqhelo kwifemu eyaziwayo uNomad, imeko yesigaba sesithathu seAirPods ngoku iyafumaneka kwivenkile ekwi-Intanethi. Khumbula ukuba le nkampani inezixhobo zazo zonke iintlobo zeemveliso ze-Apple kwaye igxile kumatyala nakwitshaja njengezona zinto ziphambili. Kule meko kuyonwabisa ukubona kwakhona emva kweeyure ezimbalwa emva kokunikezelwa kwee-AirPods 3, uNomad wayesele enayo Isikhumba sesikhumba sangoku kwiwebhu
Ngenye yeenkampani esizithanda kakhulu ngokomgangatho weemveliso zazo kunye neemveliso zika-Apple. Ngapha koko sihlala siphawula oko Nomad inokuba yinkqutyana okanye inkampani ephetheyo ekwenzeni izinto zenkampani yeCupertino yi umgangatho wezinto ezisetyenzisiweyo kunye noyilo.
Isikhumba esitsha seNomad saMhlanje sifika kwii-AirPods 3
Akumangalisi ke ukuba kwiiyure nje ezimbalwa okanye imizuzu okoko yagqitywayo umsitho ngoMvulo, nge-18 ka-Okthobha, we-MacBook Pros entshaU-Nomad uza kuphehlelela eli tyala litsha lesikhumba kwii-AirPods 3. Iyafumaneka ngokugqitywa kathathu: mnyama, mdaka kunye nendalo. Ngokusengqiqweni zonke zidityaniswa ngokugqibeleleyo kunye nezinto ezahlukeneyo abanazo ze-iPhone ngohlobo lwetyala.
Ityala elitsha likaNomad iyafumaneka ngoku kwiwebhusayithi yenkampani kwaye une Ixabiso lentengo kwi $ 34,95 kodwa siyakhumbula ukuba ukuthunyelwa kuvela eUnited States ngoko ke kungcono ukulinda de iwebhusayithi eyaziwayo yeMacnificos ifumaneke kwaye ithengwe apho kuba bengabasasazi abasemthethweni bophawu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » UNomad usungule imeko yakhe yesikhumba sanamhlanje yee-AirPods 3
Iiprosesa ezintsha zeMacBook zinenkqubo yokupholisa "abanakuze bayisebenzise"
URoss Young uthi siza kubona iMac-mini ye-27-intshi iMac ekuqaleni kuka-2022